Zizotholakala emafonini izitifiketi zabagomile
UNGQONGQOSHE wezeMpilo kuzwelonke, uDkt Joe Phaahla, uthi maduze izitifiketi eziqinisekisa ukuthi abantu bagomile zizotholakala emafonini Isithombe:ESIGCINIWE
UNGQONGQOSHE wezeMpilo kuleli, uDkt Joe Phaahla, ucacisa ngokusebenza kwezitifiketi ezizotholwa ngasebegomele iCovid-19 kuleli.
UPhaahla nePhini lakhe, uDkt Sibongiseni Dhlomo, nethimba longoti bebekhuluma esithangamini sabezindaba ngoLwesihlanu. inhloso yesithangami bekungukudalula imizamo kahulumeni yokunqanda ukubhebhetheka kweCovid-19.
Uthe abahlosile ukusebenzisa izitifiketi ukuvimbela abantu abangenazo ukuba bathole usizo ezikhungweni zikahulumeni kodwa zingase zidingakale kwabazohambela izinkundla zemidlalo nasezindaweni zokungcebeleka.
Eqhuba echaza ungqongqoshe uthe seziya emaphethelweni izinhlelo zokuthi abantu asebegomile bakwazi ukuthola izitifiketi, eziqinisekisa ukuthi bayigomele iCovid-19.
"Siqale uhlelo lokusungulwa kwezitifiketi zomgomo ezizotholakala ngendlela yezobuchwepheshe ukuze kunqandwe inkohlakalo. Lezi zitifiketi ezintsha zizokwazi ukutholakala emafonini angama-smartphone futhi zizokwazi ukuphrinteka,“ kuchaza uDkt Phaahla.
Uthe uhlelo lwenziwa ngokubambisana nemizamo yeNhlangano yezeMpilo eMhlabeni (WHO), ekuqinisekiseni ubufakazi bokuthi abantu bagomile emhlabeni jikelele. Uthe kulindeleke ukuba lingapheli isonto elizayo abantu bakuleli asebegomile, bengakazitholi lezo zitifiketi.
Uchaze kanje uPhaahla: "Uma nje isitifiketi sesitholakala, bonke asebegome ngokugcwele imininingwane yabo izobe seyivela kwi-Electronic Vaccination Data System (EVDS)."
Ngokusho kukangqongqoshe bahlela nokuthi ukubhalisela ukhetho kuhlanganiswe nokukhankasela ukuthi abantu bagomele iCovid-19. Ugcizelele ukuthi abavoti nabazobe bedlana imilala okhethweni lohulumeni basekhaya, kufanele bagonywe ukuqinisekisa ukuthi kuba nokhetho oluphephile ngoNovemba 1.
Wathi abantu sebengakwazi ukuzikhethela indawo, usuku nesikhathi abafuna ukugonywa ngaso ngokuzibekisela. Nakuba kunjalo kodwa ugcizelele ukuthi okwamanje, abantu abakavunyelwa ukuba bazikhethele ukuthi bafuna ukugonywa ngeJ&J noma ngePfizer.
Yize sekuthanda ukuba ngozimakhaza ngesivuvu sesithathu (third wave) seCovid-19 kuleli kodwa unxuse abantu ukuba bangabi budedengu.
Izifundazwe eseziphumile kwisivuvu sesithathu yiGauteng neLimpopo kodwa igciwane lisakanisile eNorthern Cape neFree State. Okunye okuvelile ukuthi yiWestern Cape esiqengqeleza phambili nesidlula iKwaZulu-Natal, ngokuba yisifundazwe esihlaselwe kakhulu yisivuvu sesithathu.
NgoLwesine isikhungo sikazwelonke, iNational Institute for Communicable Diseases (NICD), sibike ukuthi babalelwa ku-6 270 abantu bakuleli abahaqwe yiCovid-19 kanti bangu-175 asebeshonile.
Sisonke isibalo, sebangaphezu kuka-2 843 042 asebehaqekile kanti babalelwa ku-84 327 asebedlule emhlabeni. EWestern Cape kutholakale abanegciwane abangu-1 479, KwaZulu-Natal bangu-1 223, Eastern Cape bangu-1 117, Gauteng bangu-596 neFree State bangu-588. Kuleli sekugonywe abantu abangaphezu kuka-14 367 151.